यसरी हटाउनुस् दन्त मन्जनले अनुहारको दाग – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/यसरी हटाउनुस् दन्त मन्जनले अनुहारको दाग
यसरी हटाउनुस् दन्त मन्जनले अनुहारको दाग
3552minutes read
दन्त मन्जनले अनुहारको दाग हटाउछ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । दन्त मन्जनले त दात पो सफा गर्छ भन्ने सोचिरहनु भएको होला? तर यो अनुहारको कालो धव्बा हटाउनको लागि धेरै उपयोगी हुन्छ। पुरानो ब्रश नरम भैसकेको हुन्छ, त्यसैले यो गर्दा पुरानो ब्रस प्रयोग गर्यौं भने हाम्रो छालालाई हानी पुर्याउदैन। तर त्यो ब्रस आफ्नो अनुहारमा प्रयोग गर्नु अघि सफा र स्वच्छ छ कि छैन भन्ने कुरा चाँही ख्याल गर्नुपर्छ।
पुरानो टूथब्रश ,सेतो टूथपेस्ट ,बेकिंग सोडा १ कचौरा
बनाउने तरिका:,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
एउटा सुख्खा सफा कचौरा लिनुहोस्-१ चम्चा बेकिंग सोडा र १ चम्चा मन्जन हाल्नुहोस्यसमा २ चम्चा पानी थप्नुहोस् र राम्ररी मिसाउनु होस्-सो मिश्रण टूथब्रशमा लिई आफ्नो नाक स्क्रब गर्नुहोस्
अन्तिममा सफा पानीले अनुहार धुनुहोस्
यो प्रक्रिया सुत्नु अघि हप्ताको २-४ पटक दोहोर्याउनुहोस्। बेकिंग सोडा र मन्जनको मिश्रणले pores खुलाउने र छालाका तहहरूबाट अतिरिक्त तेल हटाउने काम गर्छ।
अनुहारको दाग हटाउने २० तरिका
दुई चम्चा जौको धूलोमा कागतीको रस मिसाई पेस्ट बनाएर दाग भएको ठाउँमा लगाउने गर्नुपर्छ । कागतीको रसमा ब्लिचिङ गुण हुन्छ । यसले कालो धब्बा हटाउन मद्दत गर्छ । यसका लागि कागती काटेर अनुहारमा दल्ने र केही समय त्यसै छोडी मनतातो पानीले धुने गर्नुपर्छ ।
दूधमा ल्याक्टिक एसिड पाइन्छ । काँचो दूधमा कपास डुबाई अनुहारमा बिस्तारै दल्ने र केही समय त्यसै छोडेर सुकेपछि मनतातो पानीले धुने गर्नुपर्छ ।
घ्यूकुमारीमा छालासम्बन्धी अनेक समस्या समाधान गर्ने गुण हुन्छ । यसका लागि अनुहारमा घ्यूकुमारी दलेर सुक्न दिई धुने गर्नुपर्छ । यसले छालालाई म्वइस्चराइज गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछ । बदामलाई रातभरि भिजाउने र बिहान उठी यसको पेस्ट बनाई यसमा चन्दनको पाउडर मिसाएर बनाएको पेस्ट अनुहारमा दल्ने गर्नाले अनुहारका दाग बिस्तारै हराउँदै जान्छन् ।
आलुलाई स्लाइस पारी काट्ने । यसलाई दाग भएको ठाउँमा दली सुक्न दिने र मनतातो पानीले धुने गर्नाले दाग हराउँदै जान्छ । आलुको पेस्ट बनाई यसमा मह मिसाएर अनुहारमा दली केही समय त्यसै छोडेर धुने गर्नाले अनुहारको दाग हराउँछ । बेसारमा काँचो दूध र कागतीको रस मिसाई दाग भएको ठाउँमा लगाएर केही मिनेट त्यसै छोडी मनतातो पानीले पखाल्नुपर्छ ।
पाकेको मेवाको भित्री भागलाई अनुहारमा दलेर २० मिनेटपछि पखाल्ने गर्नाले अनुहारको दाग हराउँदै जानुका साथै अनुहार चम्किलो बन्दै जान्छ । प्याजको रसले कटनको टुक्रा भिजाई दाग भएको ठाउँमा दल्ने र केही समयपछि धुने गर्नुपर्छ । साथै, एक चम्चा प्याजको रसमा दुई चम्चा मह मिसाई अनुहारमा दलेर २० मिनेटपछि पखाल्ने गर्नाले दाग हराउँदै जान्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
भुइँकटहरको जुसमा कपास डुबाई अनुहारमा दल्ने र २० मिनेटपछि पखाल्ने गर्नाले दाग हराउँदै जान्छ । ओखरलाई कुटेर त्यसमा दही र केही थोपा बदामको तेल हाल्नुहोस् । यसलाई अनुहारमा लगाउनुहोस् । यसले छालामा चमक ल्याउँछ । तपाईंको छाला एकदमै तैलीय छ भने अन्डा र गहुँको पिठोको प्याक लगाउनुहोस् ।
यसले छालाको तेललाई नियन्त्रण गर्छ । हरेक रात सुत्नुअघि अनुहारमा जैतुनको तेल लगाउनुस् । यसले अनुहारलाई नरम बनाउँछ । यसले छालामा जमेको कालो दाग कम गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछ । केरा, मौसम, अन्डाको प्याकले अनुहारमा भएका दागहरू हटाउन मद्दत गर्छ । गोलभेँडा, कागती र अन्डाको प्याक लगाउनाले डन्डीफोर, कालो धब्बा हट्नुका साथै छालामा चमक पनि आउँछ । गोलभेँडा, कागती र महको प्याक लगाउनाले अनुहार चम्किलो हुन्छ ।
घामले डढेर कालो भएको छालामा काँचो दूधले मसाज गर्दा फाइदा हुन्छ । खैरो चिनी, कागती र नरिवलको तेल मिसाई मसाज गर्नाले सनबर्नको असर कम गर्न सकिन्छ । काँक्रोको पेस्ट, मुल्तानी माटो र रोज वाटरको प्याक बनाएर लगाउँदा अनुहारमा चमक आउँछ । एक चम्चा नुनमा आधा चम्चा खाने सोडा र एक चम्चा मह राखेर घोल्ने र त्यसले अनुहारमा मसाज गर्ने यसबाट पनि अनुहारको छालामा चमक आउँछ ।
प्याज र लसुन मात्रै प्रयोग गरेर घरमा बनाउन सकिन्छ फेसप्याक
विवाहित महिलाले भुलेर पनि नगर्नुहोस यी काम, पति माथि आइपर्छ संकट
पार्लरमा बनाए जस्तै घरमैै कपाल स्ट्रेट बनाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
घरको दोस्रो लक्ष्मी अर्थात् बुहारीमा हुनुपर्ने ५ गुण
कपाल लामो र बाक्लो बनाउन चाहनुहुन्छ ? प्रयोग गर्नुहोस् यी घरेलु उपाय